लोडसेडिङ अन्त्यको एक वर्ष : यस्तो छ जनार्दन शर्माको स्मरण डायरी
जनार्दन शर्मा प्रभाकार
संयोग भनौ जनताको चाहनाबस म गत तिहारको केहि महिना अगाडि नेपाली क्रान्तीका नायक क.प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा उर्जा मन्त्री भएँ । जलश्रोतको धनी देशको १८ घण्टा लोडसेडिङ्ग गर्ने मन्त्रालयको मन्त्री ?
मन्त्री भएकै दिन लोडसेडिङ्गको पिडा वोध गरीरहेका जनताको छटपटी महसुस गरें । दोश्रो हप्ता प्रतिवद्धता पत्रको १ नम्बर बुँदामा राखेँ म लोडसेडिङ्गको पिडा बोध गरी रहेका जनताको पिडा मुक्त गर्न यो अध्यारो पनलाई हटाई लोडसेडिङ्गबाट मुक्त गर्ने छु । यस्तो भनाई अपत्यारीलो ? कसैले भने सस्तो लोकप्रियता, केहिले लेखे सबैले भन्दै आएको कुरा, कसैले भने दुस्साहस त कसैलाई लाग्यो फेरी नेताले जनतालाई झुक्यायो वा ढाँट्यो । आदि आदि…
न जनता, न कर्मचारी न व्यापारी कसैलाई विश्वास थिएन । स्वयं खडा गरेको चुनौतीले झन गम्भीर बनायो, तर हर समस्याको समाधान हुन्छ भनेर सम्हालिएँ । समस्या कहाँ छ खोज्न थालें । श्रावणमा पनि लोडसेडिङ्ग किन ? प्रश्न गर्न थाले र उत्तर खोज्दै गर्दा वितरणमा हुने अवैध व्यापारको हस्को आयो अनि व्यवस्थापनको कुनियत सच्याउन मेरो प्रतिवद्धता प्रति इमान्दार व्यक्तिको जरूरी देखें अनि अनुप उपाध्यायलाई मन्त्रालय सम्हाल्न अनुरोध गरे सँगसँगै काम नै नपाएर पाखा लागेका कुलमान खोजें । उनीहरूसहित अन्य प्राविधिकलाई राखेर भनें– मलाई उज्यालो चाहियो, अवैध व्यापार बन्द गर्ने र समान वितरण गर्ने सहि विधि तय गर्ने, थपिन सक्ने पावर थप्ने योजना चाहियो र सारमा जनतालाई उज्यालो चाहियो ।
कुलमानलाई भनें– उज्यालो तिहार हुनुपर्छ प्राविधिक कमिटी तयार भयो १५ दिनको मेहनत पछी तिहार उज्यालो पार्ने योजना बन्यो । लक्ष्मी पूजाको अवसरमा लोडसेडिङ्ग हटाउने कामको शुभारम्भ भयो, उज्यालो तिहार र छैठसम्म लोड व्यवस्थापनको रूटिन वन्यो । १२ घण्टाको औद्योगिक लोडसेडिङ्ग ४ घण्टामा झर्न सक्यो घर–घरमा चौबीसै घण्टा बत्ती बल्यो ।
विविध प्राविधिक चुनौतिका बाबजुद प्राविधिक गडबडी हुँदाको केहि समय बाहेक यो तिहार सम्म १ वर्ष पुग्यो ।
बत्ति चोर्ने, बत्ति बेच्ने र दुरूपयोग गर्नेहरूको मर्ममा प्रहार गरेर लोड व्यवस्थापनको कुशलता प्रयोग गरेर राजनैतिक र जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिबद्धताको यो उपहार हो । आर्थिक बृद्धिमा तिव्रता, अँध्यारोको त्रासबाट जनताको मुक्ती, युवाहरूमा नयाँ विश्वास र आशा । देश बनाउन इमान्दार प्रयत्न, कुशल व्यवस्थापन, चुनौती खडा गर्दै सामना गर्ने प्रतिवद्धता हाम्रो ूउज्यालो नेपालको सफलता । धन्यवाद मेरो टोलीलाई जस्ले दुस्साहसी भनिएको, सस्तो लोकप्रियता भनिएको, झुट्ठा आस्वासनमा गनिएको सोचलाई जवाफ दियो ।
धन्यवाद मलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दीने मेरा आदरणीय नेता प्रचण्डलाई, धन्यवाद इमान्दार नेतृत्व गर्ने सचिव अनुपलाई, धन्यवाद कुलमानको नेतृत्वको प्राविधिक टिमलाई । धन्यवाद मलाई हौसला प्रदान गर्ने युवा साथीहरूलाई, सवै आदरणीय जनतालाई । उज्यालो नेपालको १ वर्षको सफलताको अनुभुती सगैँ दिपावलीको उपलक्ष्यमा शुभ–कामना । अव समृद्धिका लागि नेपालको पानी जनताको लगानी । अव नयाँ अभियान ।